Gudoomiyihii Maxakamadda Sare Oo Sheegay Inaan Madaxweyne Siilaanyo iyo Baarlamaanku Xilka Qaadistiisa Dariiq Sharci U Marin | Duul News International
Gudoomiyihii Maxakamadda Sare Oo Sheegay Inaan Madaxweyne Siilaanyo iyo Baarlamaanku Xilka Qaadistiisa Dariiq Sharci U Marin	(Duulnews)- Gudoomiyihii Maxakamadda sare ee Somaliland, Yuusuf Ismaaciil Cali, oo markii u horaysay ka hadlay xilka qaadistiisa ayaa sheegay inaan sifo sharci ah loo marin xilka qaadistiisa. Waxa uu sheegay in sababta uu xilkiisa ku waayay tahay dad damac gaar ah isku hayay loo tixgaliyay cabashadooda isagana aan lala socodsiin.
Yuusuf Ismaaciil Cali oo BBC-da u waramay ayaa ugu horayn sheegay inaan dariiq sharci ah loo marin xilka qaadistiisa “Magacaabista Gudoomiyaha Maxakamadda sare iyo xilka qaadistiisaba waxaa koobsanaya qodobka 105-aad ee Dastuurka Somaliland. Marka Madaxweynuhu doono inuu xilka ka qaado Gudoomiyaha Maxakamadda sare waxa uu leeyahay soo jeedin ah inuu Baarlamaanka u gudbiyo, Baarlamaankuna fadhi wada jir ah iyo naaqishaad kadib waxay awood u leeyihiin in Sababaha Madaxweynuhu cuskaday aqbalaan iyo in kale. Arrinta xilka qaadistaydana looma marin dariiqaas” Ayuu yidhi Gudoomiyaha hore ee Maxakamadda sare.
Yuusuf Ismaaciil Cali, waxa uu ka hadlay sida uu arko fadhigii Golaha wakiiladu maanta ku ansixiyay xilka qaadistiisa “Fadhiga labada gole waxaa ka horraysay xilka qaadistayda oo Madaxweynuhu isagoo aan la tashan labada gole sheegay inuu la tashaday Guddida caddaaladda, arrintaasina waa sharci darro, Guddida caddaaladda wuxuu la tashanayaa markuu rabo inuu magacaabo gudoomiyaha Maxakamadda sare, arrinta xilka qaadistuna waa qayrul dastuuri isagoon haysan Ogolaanshaha labada gole. Golaha maanta xilka qaadistayda ansixiyay waxaan ka filayay inay dood ka galaan digreetadu horta dariiq sharci ah ma idiinku timid mise idiin kumay iman”
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay in golaha wakiiladu baneeyay Waxaan Somaliland hore uga jirin “Xilka aan hayay Qaranka iyo Umadda ayaa leh, Umaddana waxaa ka wakiil ahaa Baarlamaanka laakiin, waxaan sheegayaa inay xalaaleeyeen Sunne aan hore u jiri jirin oo aan dastuurka inoogu qornayn”
Gudoomiyaha hore ee Maxakamaddu wuxuu iska difaacay Eedo Madaxweyne Siilaanyo xilka qaadistiisa ku sababeeyay oo ku saabsan in guddida caddaaladda uu la shaqayn kari waayay iyo in cabasho bulshada ka soo gaadhay, waxaanu sheegay in cabashada Maxakamadduhu ka garnaqaane Madaxtooyada lala tagin.
“Cabashooyinka waxaa ku shaqo leh Maxakamaddaha kala sareeya, Cabashadu maaha mid Madaxtooyada loo qoranayo ama Madaxweynuhu sababayn karo, Xabsiyadana Cabasho kamay iman. Damac dad isku haya oo dan gaara leh ayaa cabashada loo tixgaliyay waxna la igama waydiin” ayuu yidhi Mr Yuusuf Ismaaciil Cali.
Gudoomiyaha hore waxa uu sheegay inuu ka sii mid ahaanayo Bahda garsoorka Somaliland oo xirfaddiisu tahay.